क्यान्सरको उपचार नेपालमा नै के के राम्रो संग गर्न सकिन्छ? कस्तो केसको लागि चाँही अझै बिदेश जानु पर्छ?
म आविश - म क्यान्सर रोग विशेषज्ञ हुँ र काठमाडौं क्यान्सर सेन्टरमा काम गर्छु ।
क्यान्सर एउटा गम्भिर रोग हो, जसले स्वास्थ्यमा, परिवारमा र आफ्नो आर्थिक अवस्थामा गम्भिर असर गर्छ । यो रोगको निदान प्रारम्भिक अवस्थामै र उपचार सहि तरिकाले गर्न सक्ने हो भने निको हुने सम्भावना बढेर जान्छ । त्यसैले यो रोगको सही उपचार हुन जरुरी छ ।
क्यान्सरको उपचारमा तिन प्रविधि प्रयोग हुन्छन् ।
१- सल्यक्रिया - जसमा क्यान्सर लागेको अँग वा भाग काटेर निकालिन्छ ।
२- किमोथेरापी - जसमा सुईँ वा ट्याब्लेटबाट क्यान्सरको औषधिहरू दिइन्छ ।
३‍- रेडियोथेरापी - जसमा विकिरणहरु - एक्सरेको प्रयोग द्वारा क्यान्सरका कोषहरूलाई मारिन्छ ।
नेपालमा यि ३ वटै उपचार सम्भव छन् ।
- अहिले क्यान्सरकै सल्यक्रियामा पोक्त सल्यचिकित्सकहरू हुनुहुन्छ जसले निकै राम्रो सल्यक्रिया गर्नुहुन्छ ।
- किमोथेरापीका सबै औषधि नेपालमै पाइन्छन् र किमोथेरापीकै विशेषज्ञता लिएर आउनुभएका अँकोलोजिस्टहरू नेपालमै हुनुहुन्छ जसले गर्दा पहिला जस्तो विदेश जान पर्ने हुँदैन ।
- रेडियोथेरापीमा प्रयोग हुने विशेष प्रकारको मेसिनलाई लिनियर एक्सिलिरेटर भनिन्छ- जुन अहिले नेपालमा उपलव्ध छन् । रेडियोथेरापीमा प्रयोग हुने सबै प्रविधिहरू नेपालमै भएकाले रेडियोथेरापीलाई विदेश जान जरुरी छैन ।
म कार्यरत काठमाडौं क्यान्सर सेन्टरमा हामीले हजारौँ क्यान्सरका बिरामीहरूको सफलतापुर्वक उपचार गरेका छौं ।
यति भनिरहँदा - केही विशेष परिस्थितीमा भने विदेश जानु पर्ने हुन सक्छ । ‍
- रोबोटिक सर्जरी नेपालमा उपलव्ध छैन - जसको लागी विदेश जान जरुरी हुन्छ । रोबोटिक सर्जरी सबै क्यान्सरमा गरिँदैन, सानो आकारको प्रोस्टेक क्यान्सरमा प्रयोग हुन्छ । हाम्रा भुतपुर्व राष्ट्रपति रामवरण यादवको रोबोटिक सर्जरी अमेरिकामा भएको थियो ।
- भर्खर बन्दै गरेका किमोथेरापीका औषधिहरूको मानव-अध्ययन ट्रायलहरू नेपालमा हुँदैनन् - त्यस्ता ट्रायलहरूमा भाग लिन विदेश जानुपर्न हुन सक्छ ।
- दिमागमा भएका निकै साना ट्युमरहरुलाई साइबर‍‍-नाईफ - गामा-नाइफ भन्ने मेसिनहरू चाहिन सक्छन् - यि नेपालमा उपलव्ध छैनन् । तर अहिले नेपालमै भएका लिनियर‍-एक्सिलिरेटरहरूबाट पनि यि साना ट्युमरहरुको उपचार सम्भव भएको छ ।
छोटकरीमा भन्नुपर्दा, क्यान्सरको सम्पुर्ण उपचार नेपालमै सम्भव छ - राम्रो उपचार गराउन आफै पनि अलिकति पढ्नुहोस् र विशेषज्ञहरूसँग सल्लाह गर्नुहोस् ।
क्यान्सरको बिरामी, परिवार र डाक्टरहरू सबै जना मिलेर अघि बढ्ने हो भने नेपालमै क्यान्सरको राम्रो उपचार हुन्छ ।
म सँग कुरा गर्न चाहनुहुन्छ भने मलाई abish-at-outlook-dot-com मा ईमेल गर्न सक्नुहुन्छ ।
यसको अडियो संस्करण यता छ : https://bit.ly/3xtGnEq